Kiriptoo Karensiin addunyaan ammaan tana odeessaa jiru kun maaliidha? - BBC News Afaan Oromoo
Kiriptoo Karensiin addunyaan ammaan tana odeessaa jiru kun maaliidha?
Jechoonni 'bitcoin', 'block chain, 'crypto currency', mining' fi kanneen biroon namoota daldala hojjetan biratti daran gurra horachaa jiru. Tarii gosti maallaqaa kun maallaqa addunyaa isa itti aanu tahuu malaa? Odeessi kun waa'ee kanaa isinitti hima.
Dhalli namaa inni duraa ija mukkeenii funaanuu fi bineeldoota adamsuun jireenya isaa itti fufiinsuun ilmaan namaa sadarkaa har'a irratti argaman irra qaqqabeera.
Haalli jireenyaas adeemsaa fi guddina teknooloojiitiin walqabatee saffiisaan geeddaramaa dhufeera. Kanaafis agarsiisa kan nuuf ta'u, maallaqoonni dijitaalii omishaa fi tajaajilawwan bitachuufi gurguruuf hojiirra oolaa jiraachuu isaaniiti.
Teeknoloojiiwwan jaarraa 21ffaan wal nu barsiise keessaa tokko Kirptoo karansiin (Crypto currency) isa tokkodha.
Akka galmee jechootaa Oksifoordiitti, Kirpto karansiin kan nageenya jijjirraa maallaqaa mirkanneessu, jechooti dabalataa umamusaanii kan to'atuufi jijjirraan maallaqaa taasifamusaan akka to'atu taasifamee kan hojjatameedha jechuun ibsa.
Ulaagaalee armaan olitti eeraman kanneen kan guutan Kiriiptoo karansiin hedduun jiraachuus ni himama. Kanneen bal'inaan beekaman keessaa Biitkoyiin, Riippiilii fi Biitikooyiin kaash isaan muraasa.
Nutis xiyyeeffannaa keenya Bitcoin qofa irratti taasifna.
Biit kooyiin maaliidha?
Bitcoin jechuun haala salphaa ta'een dijitaal, maallaqaa fi mala ittiin bittaafi gurgurtaa jechuun ni danda'ama.
Malli ittiin daldalamu kunis kan akka maallaqaa ykn saantima kaanii kan kiisii keenyatti baannee deemnu osoo hintaane, maallaqa dijitaalii karaa interneetii ykn onlaayiinii itti gargaramnuudha.
Amalli addaa Bitcoin fi kriptoo karansiiwwan kan biraa, akka maalaqawwan biraa motummootaa fi baankiiwwaniin kan maxxanfaman ta'uu dhiisuu isaati. Akkasumas to'atamuu hin danda'amu.
Bitcoin kan uumamu adeemsa maayiiniigi 'mining' jedhamuun. Kompiyutaroota walitti hidhama qabanii qofa addunyaa guutuutti to'annaa taasifamaafi.
Namni ykn gareen Biiti kooyinii uumees biiti kooyinoota miiliiyona 21 qofaan akka omishamaniif daangaa kaa'unsaa ni amanama.
Ragaaleen 'Block chain' akka mul'isaniitti, hanga ammaattis biiti kooyiniiwwan miiliyoona 17 ta'an omishaman (maayin) taasifamaniiru.
Gatiin Bitcoin tasgabbaa'uu dhabuu
Gatiin Bitcoin tokkoo Amajjii 15 bara 2018tti dolaara Ameerikaa 10,031 ture.
Waggaa tokkoon booda ammoo gatiin Bitcoin tokkoo doolaara 3,561 tti gadi bu'eera.
Biiti kooyiin erga umammee waaggoota 10 ta'eera. Waggoottan 10 darban keessas gatiin isaa haalaan dabalaa dhufeera. Bara darbe baatii Guraandhalaa kessa gatiin biiti kooyinii tokkoo doolaara Ameerikaa kuma 10 ol gaheera.
Gatiin kunis kan waggoota lamaan dura ture waliin yoo wal biratti ilaalamu, dachaa lamaan dabaleera jadhama. Ammaan tana garuu gatii waggoota sadiin dura turree irraa dachaa sadiin hirateera.
Dabaluu fi hir'achuu gatii isaa kanaafis sababiin adda baafamee barame hinjiru. Qaamoonni barbaadamummaan isaatuu daballaan gatiinsaa dabalee kan jedhanis hindhiibne.
Biiti Koyiiniin bittaa gurgurtaa gaggeessuun danda'amaa?
Eeyyeen. Dhaabbilee tajaajilaa fi omisha dhiyeessaniif kanfalltii haala bitii kooyiniitiin fudhatan ni jiru. Kanneen akka Maayikrosooft, KFC kan nyaata dhiyeessu fi Sabiweeyi akkasumas bakka bu'aan ilamaa Eksipiidiyaa fi kan kana fakkaatan biiti kooniiy ni fudhatu. Hotellonnii fi kaafteeriyaaleen kanfaltii bifa kanaan fudhatan jiraachu maddeen ni mul'isu.
Biitii kooyiin bittaa yoo gaggeefamu eenyummaan abbicha ifa ta'u dhiisu ni dandeesisa. Sababii kanaafuu fayyadamni biitii kooyiin dabalaa jira.
Biiti Kooyiin akka yaaddootti?
Kubbaaniyaa Evarast jedhuutti oggeessa faayinaaniis kan ta'an BiraaDaliiy Raayis akka jedhaniitti, biiti kooyiin irratti to'annaa kamiiyuu hintaasifamu.
Kana malees eenyummaan abbichaa osoo ifa hintaane jijjiraan Biitii kooyiin sa'aa barbaadameefi eesssattu taasifamu danda'a. Dadabarsuufis akkasuma.
Kanaanis gareewwan karaa seeraan alaatiin meeshaalee waraa fi qorichoota sammuu adoochoo ta'an ittiin bitu danda'u. Akkasumas dadabarsuu maalllaqaa seeraan alaa fi shororkeessuuta deeggaruuf ni dandeessisa jechuun, bitii kooyinii fi kirpto karansii birraatti namoonni yaaddoo qaban baayyedha.
Gama biraatinis, oggeeyyiin faayinaanis hedduun to'annoon irratti taasifamu dhibuusaatiif barbaadamummaansaa dabaleera jedhu.
ALA bara 2009 tti kan iftoome Biit koyiniin (Bit Coin) seera qabbessa moo yookaas seeraan ala? jechuuN gaaffii keessa tureera.
Gaaffiin kunis argamuU kan danda'u eessayii kan jedhuu yoo itti dabalame deebii argachuU danda'a ta'a.
Dinagdeewwan gurguddoon addunyaa kan akka Gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaaa fi Awustiraaliyaa fa'iis Bit Kooyiniif ilaalcha gaarii qabu.
Biiti kooyiin amma waggoota 10 lakkoofsiisuulleen, biyyoon addunyaa garuu dhimmicha irratti seeraa ifa ta'e hinqaban. Kirtpo karansii to'achuun dadhabamuunsaa ammoo motummoota addunyaatti danqaa ta'uun tureera.
Warraaqsa M-PESA: Maallaqa keessan Moobaayilii keessaniin
Amoolee: Itoophiyaatti tajaajilli kanfaltii dijitaalaa haaraan eegale
19 Adooleessa 2018